Napoli akasaina kontrakiti chibvumirano cheNigerian hitter Victor Osimhen - teles relay
Italian Serie Chikwata chaNapoli chakasimbisa kusaina kweiye mutambi wechidiki wekuNigeria, Victor Osimhen anobva kuFrance kirabhu yeLille.
Webhusaiti yaNapoli yakapa ruzivo mashoma pachibvumirano ichi, ichingoti: "SSC Napoli vanofara kuzivisa kusainwa kwaVictor Osimhen kubva kuLille kuchinjwe zvachose. "
Maererano nepepanhau remitambo reFrance L'Equipe, chibvumirano chakakosha kudarika madhora mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe emamiriyoni emamirioni (€ 96 miriyoni), zvichimuita mutambi weAfrica anodhura kwazvo wenguva dzese.
Napoli parizvino akabhadhara kudarika chikamu chechirungu iyo Arsenal yakabhadhara muLille kwaNicolas Pepe weCote d'Ivoire iripo gore.
Osimhen akanga abatana naLille kubva kuCharleroi kuBelgium kutsiva Pepe.
MLS ichaita zvakare mwaka wenguva: Zvatinoziva, uye izvo isu…
Mushure mekupfura 18 zvibodzwa mumakwikwi ese eLille mwaka wadarika, uyo ane makore makumi maviri nemaviri akabatanidzwa kwemavhiki akati wandei naNapoli.
Muna June zvaive anonzi Lille mutambi wemwaka panguva yekuridza kwake kuFrance, uye wekuNigerian akatumidzwa kune Ligue 1 timu yemwaka.
Osimhen akaputika mune yakakwenenzverwa kuWorld Under-17 World Cup muChile, achikunda mubairo weGolden Boot neSilver Ball apo ichitungamira iyo Golden Eaglets kune iyo zita.
Iye ane makore gumi nematatu akahwina rekodhi yemakirabhu gumi, achihwina imwe neimwe yemitambo yeNigeria, chiitiko chakamuwanisa mubairo weYouth African Player yeGore ra16.
Zvaakaita paWorld Cup izvi zvakamuitawo kuti aende kuWolfsburg, asi Osimhen, akaramba Arsenal yekutamba muGundesliga yeGerman, akabvuma kunetseka apo zvishoma nezvishoma akajaira kuenda kumakwikwi eEuropean nhabvu.
Mushure memwaka usina chibereko umo mutambi akakuvara akatadza kuwana mumitambo gumi nematanhatu, akatamira kuBelgium uko zvinangwa zvakakurumidza kunyura - 16 mushandirapamwe yake kuCharleroi, kwaakange ari pakutanga wakweretwa usati waita kutama zvachose.
Chinyorwa ichi chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/sport/africa/53609226
DR Congo inoratidzira mushure mekunge masoja gumi nematanhatu akadhakwa afa
MLS ichaita zvakare mwaka wenguva: Zvatinoziva, nezvatisingaite